မှတ်ဥာဏ်ပြmemoryနာများကိုဖြေရှင်းရန် Pixel3ကိုအဆင့်မြှင့်ပါလိမ့်မည် Androidsis
Google သည်ပြfixနာများကိုဖြေရှင်းရန်အဖြေရှာပြီ Pixel ၏မှတ်ဉာဏ် ၃။ Pixel ၏ပိုင်ရှင်များသည်များစွာသောသူတို့ကိုခါးသီးသောလမ်းပေါ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသောမှတ်ဉာဏ်ပြproblemsနာများကိုမေ့နိုင်သည့် update မှတဆင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
အထူးသဖြင့်ဓာတ်ပုံအလွန်မြင့်မားသောဖုန်းကိုသုံးသည်။ ဒါကဒီကဗျာကြောင်းကွန်ပျူတာနှင့် software ကိုအတူ, ဝေးနောက်ကွယ်မှယှဉ်ပြိုင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် အားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့မဟုတ်ပါဘူး ဒီစမတ်ဖုန်းမှာသင်ပြproblemနာရှိနေသေးတယ်။
အဖြစ် ဓာတ်ပုံများ၏ဘာသာရပ်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်, Pixel3ရှိခဲ့ပါတယ် လေးနက်သောမှတ်ဥာဏ်ပြproblemsနာများ တစ်ချိန်တည်းတွင် application အများအပြားဖွင့်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း။ multitasking နှင့်မည်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုမျိုးကိုမဆို app တစ်ခုမှတစ်ခုသို့သွားသောအသုံးပြုသူများအတွက်အလွန်ကြီးလေးသောပြproblemနာတစ်ခု။
အဆိုပါ Pixel3ပေမယ့် 4GB RAM ရှိမယ်၎င်းသည်လေးလံသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်လှုပ်ရှားရသောဂိမ်းများနှင့်ကစားရန်လုံလောက်သည်ထက်ပိုသည်။ ဘာလဲ Android ပေါ်သို့ Blizzard ဆင်းသက်မည်.
Pixel3၏မှတ်ဉာဏ်ပြproblemနာက system ကိုနားလည်သည့်အခါဖြစ်သည် နောက်ကွယ်မှာ apps များလွန်းရှိခဲ့သည်, ချက်ချင်းသူတို့ကိုပိတ်လိုက်တယ်။ အကယ်လို့သင်က Pixel3ကိုပိုင်တယ်ဆိုရင်မကြာသေးခင်ကအက်ပလီကေးရှင်းတွေမှာဖေ့စ်ဘွတ်ခ် (သို့) အခြားတစ်ခုမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်၊
ဘယ်အချိန်မှာလာမလဲ ပျော်ရွှင်သော update သည် Pixel3သို့ရောက်ရှိသည် ဒါကမှတ်ဥာဏ်ပြproblemနာကိုပိုကောင်းတဲ့ဘဝဆီသို့ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းရန်ဖွင့်ထားသောအက်ပလီကေးရှင်းများစွာနှင့်နေ့စဉ်မိမိကိုယ်ကိုကိုင်တွယ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောကိစ္စဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပြီးသားသည်သူ၏အတွက်မိန့်မြွက်တော်မူ၏ ပြနာအခိုက်အတန့်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Google သည် Pixel3ကို update လုပ်မည်ဖြစ်ပြီး memory ပြmemoryနာများကိုဖြေရှင်းမည်